- INDLU YEZIMANGALISO - Ukuphumula kanye ne-Apuan Nature⭐ - I-Airbnb
- INDLU YEZIMANGALISO - Ukuphumula kanye ne-Apuan Nature⭐
Massa, Toscana, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Giorgio
INDAWO EKHETHEKILE KANYE NENSUKWENZA, imizuzu eyi-10 ngemoto ukusuka enkabeni yeMassa nemizuzu engama-20 ukusuka ogwini lolwandle. Le ndlu enezitezi ezintathu itholakala emithambekeni ye-Apuan Alps futhi ibheke umfula i-Renara, indawo lapho izivakashi kanye nabantu bendawo beya kuzo ukuze baphole ngezinsuku ezishisayo zasehlobo namachibi awo anamanzi acwebile.
Yakhiwe ngamakamelo okulala amabili anegumbi lokugezela langasese kanye negumbi elinombhede osofa ababili nendawo yokugezela yangasese.
Indawo enhle yokuqala yokuhamba ngezinyawo ezinhle e-Apuan Alps.
Indawo inhle kakhulu, ebangeni elifanele ukusuka edolobheni nasolwandle, umfula omuhle ongaphansi kwendlu ongazwakala ekuthuleni okuvamile kwendawo.
Amachibi amahle emvelo wamanzi acwebile
Indawo ethulile, ezungezwe imvelo izinyathelo ezimbalwa ukusuka edolobheni. Indawo evamise ukuya kuyo abantu abasha kanye nemindeni ikakhulukazi ngesikhathi sasentwasahlobo - sasehlobo, ukuze ubaleke endaweni ematasatasa yedolobha ngokuzicwilisa esimweni esiyela ngasocansini nesihlukile. Emamitha ambalwa ukusuka umfula i-Renara ugeleza namachibi acwebezelayo amahle ongacwiliswa kuwo eduze ne-Alps.
I-7 km ukuya eMassa Centro
12 km ukusuka olwandle
13 km ukuya eCarrara
Indawo ethulile, ezungezwe imvelo, ibanga elingamakhilomitha ambalwa kuphela ukusuka edolobheni kanye nogu lolwandle. Kudume kakhulu kubantu abasha kanye nemindeni ikakhulukazi ngesikhathi sasentwasahlobo/ehlobo, ukubalekela isimo sezulu esimatasa sedolobha futhi bazicwilise endaweni eyela ngasocansini nekhethekile.
Emamitha ambalwa ukusuka, umfula iRenara ugeleza namachibi acwebezelayo amahle ongatshuza kuwo eduze ne-Alps.
12 Km ukuya ogwini
Disponibile per rendere il vostro soggiorno il più piacevole possibile, pronto a soddisfare ogni vostra richiesta.
Ngihlala endaweni yaseMassa, ngakho-ke ngiyatholakala nganoma yisiphi isicelo
ngihlala eduzane nendawo ngakho ngiyatholakala kuso sonke isicelo.
Inombolo yepholisi: 045010LTN0327
Hlola ezinye izinketho ezise- Massa namaphethelo